Tazonina ao amin’ny foiben’ny fiarovam-panjakana ilay bilaogera Ejipsiana tsy hita · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Janoary 2019 20:38 GMT
Tsy hita nandritra ny dimy andro ilay bilaogera Ejiptiana, Mohamed Adel – dimy andro izay tsy nisy olona naheno azy na nahafantatra ny toerana misy azy.
Ankehitriny dia milaza ny ny tambajotra Arabo misahana ny zon'olombelona (ANHRI) fa tazonina ao amin'ny foiben'ny fiarovam-panjakana ao Kairo, fantatra koa amin'ny hoe “Lazogli”, toerana anjakan'ny fampijaliana ao amin'ny rihana faha-efatra malaza ratsy ity bilaogera, izay mitantana ny bilaogy Meit [Ar], izay midika hoe efa maty amin'ny teny Anglisy ity.
Nanameloka ny fisamborana ity tanora bilaogera ity ny ANHRI, nalaina an-keriny izy ary notazonina tamin'ny toerana tsy fantatra hatramin'ny 20 Novambra. Nanambara tamin'ny gazety ity fikambanana tsy miankina ao Kairo ity fa:
Nohodidin'ny miaramila efa-polo, mpitandro filaminana manokana sy fiara polisy telo ny tranon'i Adel, niditra an-keriny tao an-tranony izy ireo, nikarokaroka tao an-tranony ary nandraoka ireo boky sy kapila mangilatra. Tany ivelan'ny tranony ity bilaogera roapolo taona ity nandritra ny hetsiky ny polisy. Toa nanara-maso ny findainy ny polisy, ary nalaina an-keriny izy raha teny an-dalana hihaona amin'ny namany izay mpanao gazety
Manaparitaka sora-baventy mitaky ny famotsorana azy ao amin'ny Facebook ny naman'i Adel- manolo ny sarin'izy ireo ao amin'ny Facebook ho sarin'i Adel ny sasany amin'izy ireo. Miantso fitokonana manoloana ny biraon'ny mpampanoa lalàna ihany koa izy ireo mandra-pahavotsotra ny naman'izy ireo. Mandritra izany, dia nametraka fitoriana roa an'ny mpampanao lalàna ny rain'ity bilaogera ity, mitaky filazana tsy misy hatak'andro ny toerana misy ny zanany lahy, nanamafy ny mpampanoa lalàna fa karohana ho atao fanadihadiana ny zanany lahy.